Maalinta Koowaad: gorgortanka mobilada iyo smartwatch ee aad wali ka faa'iideysan karto | Androidsis
Maalinta Amazon Prime Day 2021 waxay ku bilaabatay dalabyo badan oo xiiso leh oo ku saabsan teknolojiyadda, otomatiga guriga iyo guriga, iyo kuwo kale oo badan oo la heli karo. Telefoonada casriga ah ayaa wali ah kuwa ugu caansan wax soo saarka, laakiin kuwa kale ee soo galay xarunta dhexe waa kombiyuutarada, saacadaha saacadaha lagu qaado, qalabka faakiyuumka lagu nadiifiyo, mashiinada kafeega, burush koronto iyo waxyaabo kale oo badan.
Waa wakhti ku habboon in taleefannada la beddelo, lagu beddelo kafee-ka sameeyaha guriga sababo la xiriira hoos u dhaca weyn ee ku yimid kumanaan shey. Maalinta Koowaad 2021 waxay bilaabatay Juun 21 waxayna dhammaatay maanta Juun 22 markay ahayd 23:59 pm., sidaas darteed wali waxaa jira saacado yar oo looga faa'iideysan karo dalabyada kala duwan.
4 Samsung Galaxy Watch3 Smartwatch
Shaki la'aan waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu muhiimsan ee soo saaraha POCO, oo hadda ah shirkad madax-bannaan oo Xiaomi ah. POCO X3 Pro waa aalad dhammaadkeedu sarreeyo leh shaashad 6,67-inch IPS ah (120 Hz refresh rate), processor Snapdragon 860, 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB kaydinta.
Mid ka mid ah astaamaha ka dhigaya terminal muhiim ah ayaa ku jira isku xirnaanta MIUI 12, lakabku wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka hawlgalka ee Android 11. Poco X3 Pro wuxuu ku dhejinayaa afar muraayadaha gadaal ah, kan ugu weyni waa 48 megapixels, midka labaadna waa 8 megapixel wide angle, 2 megapixel macro iyo 2 megapixel sensor qoto dheer.
Waxaad ku heli kartaa POCO X3 Pro keliya € 169 hadaad ka samayso xiriiriye
Mid ka mid ah calanka Samsung ayaa ku guuleystey inuu ilaaliyo guusha iibka ee moodellooyinkii hore iyadoo bixitaanka Galaxy Note 20. Waxay ku dhexjirtaa 6,7 "nooc-guri flat" Super AMOLED Plus "ah oo leh xallinta Full HD +, heerka cusbooneysiinta 60 Hz iyo saamiga 20: 9.
Samsung Galaxy Note 20 wuxuu isku daraa Exynos 990 maskax ahaan shirkadda, 8 GB oo RAM ah, 256 GB oo keyd ah iyo batari 4.400 mAh ah. Telefoonka gacanta wuxuu la yimaadaa noocii ugu dambeeyay ee Android iyo midka loo yaqaan 'One UI 3.1 lakabka caadiga ah, oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo muhiim ah
Waxaad ku iibsan kartaa Samsung Galaxy Note 20 4G kaliya 804 XNUMX laga soo xigtay
Soo saaraha Aasiya ee Xiaomi ayaa soo saaray bishii Sebtember ee sanadkii hore qalab loogu talagalay inuu daboolo dhinac kasta, oo ay ku jiraan ciyaaraha. Xiaomi Mi 10T Pro waa taleefan 5G ahIntaa waxaa sii dheer, processor-ku waa Snapdragon 865 oo si fiican loo yaqaan oo leh 'Adreno 650 graphic chip', oo ku habboon dhaqaajinta ciyaar kasta oo fiidiyow ah 'Android'
Waxyaabaha ay ka kooban tahay, Xiaomi Mi 10T Pro wuxuu leeyahay 8 GB oo RAM ah, 128 GB keydinta gudaha ah, batari awood badan leh oo ah 5.000 Mah oo si dhakhso leh u qaadanaya 33 waxaana ku jira hadiyad ahaan Bukaanka Mi Electric Scooter 1S. Waa taleefan casri ah oo heer sare ah oo leh 108 megapixel sensor, mid ka mid ah kuwa maanta ugu awoodda badan.
Waxaad ku heli kartaa Xiaomi Mi 10T Pro kaliya € 549,99 laga soo xigtay
Waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee casriga ah ee casriga ah oo ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadda oo lagu daray heer ahaan. Samsung Galaxy Watch 3 wuxuu ku dhejiyaa guddi 1,2-inch Super AMOLED ah oo leh xallinta pixel 360 x 360 iyo ilaalinta Corning Gorilla Glass DX, oo ku habboon u adkeysiga xagashada, cadaadiska iyo dhibcaha.
Galaxy Watch3 wuxuu kaloo leeyahay processor Exynos 9110 Dual-Core 1,15 GHz, 1 GB oo RAM ah, 8 GB oo keyd ah iyo batari 340 mAh ah. Naqshadeynta bezel waa la beddeli karaa, waa la quusin karaa ilaa 5 ATM iyo nidaamka qalliinka wuxuu ku saleysan yahay Tizen 5.5. Xidhiidhka saacadu waa Wi-Fi, Bluetooth 5.0, iyo isku xidhka LTE.
Waxaad ku iibsan kartaa Samsung Galaxy Watch3 kaliya 255,59 ka soo xiriir
Garmin Fènix 6 PRO waa saacad-wareed smartwatch ah oo loogu talagay kuwa hal-abuurka leh kuwaas oo jecel xiisaha buuraha, tamashle u baxa ama u baxa ciyaaraha isboortiga. Saacadda casriga ah waxay leedahay khariidado astaanta, marka laga reebo garaacista muusikada, cabbirka garaaca wadnaha, dhammaantoodna waxay ku mahadsan yihiin dareemayaasha.
Shaashadda Garming Fènix 6 Pro waa 1,2 inji, wuxuu leeyahay ismaamul 14 maalmood ah oo la adeegsanayo, isku xirnaanta Bluetooth, Wi-Fi, GPS iyo xiriir toos ah oo lala yeelanayo adeegyada sida Spotify iyo Deezer. Smartwatch wuxuu leeyahay cabirro gaaraya 4.7 x 4.7 x 1.47 cm iyo miisaanka 80 garaam oo keliya.
Kusoo hel Garming Fènix 6 Pro kaliya € 459,99 laga soo xigtay
Shirkada Cupertino ee iphone 12 waxay soo saartay mid kamid ah taleefanada oo wata qalab qaab casri ah iyo qaab cusub oo naqshad leh. Telefoonku wuxuu dhejinayaa 6,1-inji Super Retina XDR guddi ah, kana xoog badan muraayadda taleefan kasta oo leh qaraar dhan 2.532 x 1.170 pixels.
IPhone 12 chip waa 14nm Apple A5 Bionic, 128GB kaydinta gudaha, macruufka 14 sida nidaamka qalliinka iyo kamarad gadaal laba jibaaran, oo ah dareenka ugu weyn ee 12 MP QuadLED flash iyo xagal balaaran oo ah 8 megapixels. Qiimaha iPhone 12 waa 833 euro.
Waxaad ku iibsan kartaa iPhone 12 kaliya € 822 laga soo xigtay
Mid ka mid ah laptop-yada saxda ah ee ciyaarta ayaa ah ASUS TUF Dash F15 TUF516PM-HN135. Waxaa loo sameeyay loonaguna talagalay inay sameyso kahor cinwaan kasta, marka lagu daro ku dhejinta mid ka mid ah shaashadaha ugu fiican suuqa kaliya 15,6 inji oo Full HD ah (1920 x 1080) iyo heerka cusbooneysiinta ee 144 Hz.
Qaab dhismeedka ay la imaaneyso waa processor Intel Core i7-11370H, 16 GB oo RAM ah, 512 GB SSD keyd ah, kaarka sawirada ee NVIDIA GeForce RTX3060-6GB GDDR6 iyo culeyska kaliya 2,3 kiilo. Laptop-ka wuxuu leeyahay kiiboodhka QWERTY iyo baytari awood badan.
Waxaad ka iibsan kartaa ASUS TUF Dash F15 TUF516PM-HN135 kaliya € 999,99 adigoo gujinaya xiriiriyahan
Mid ka mid ah buugaagta ugu fudud ee lagu qoro suuqa, culeyskiisuna yahay 1,38 kiilogaraam. Huawei Matebook D14 wuxuu la yimid shaashad dhan 14-inch Full HD + IPS (1920 x 1080 pixels), oo soo bandhigaya sawiro tayo sare leh iyo video HD ah.
El Huawei Matebook D14 waxay la socotaa processor Intel Core i5 10210U 1,6 ilaa 4,2 GHz oo awood ah, 8 GB oo RAM ah, 512 GB SSD, kaarka sawirada ee GeForce MX250 iyo Windows 10 Home operating system. Waxay leedahay dareeraha faraha ee Huawei One Touch si uu u shito oo uu si fudud ugu galo kombiyuutarka adigoo riixaya batoonka awoodda.
Waxaad ka iibsan kartaa laptop-ka Huawei Matebook D14 laptop kaliya € 710 ka soo xiriir
Telefishinnadu waxay noqdeen cunsur muhiim u ah guriga iyo xarumaha. Sharad cad marka ay timaado inaad rabto inaad aragto waxa ugu badan ee nool waa Samsung oo leh qaabkeeda UHD 2020 55TU8005, Muuqaal 55-inji ah oo Crystal Display ah, xallinta 4K, processor 4K, PurColor iyo kaaliyaha codka ee Alexa.
Waxay hirgelisaa HDR 10+, tiknoolajiyad abuurta madow iyo xoog qoto dheer heerka faahfaahinta goob kasta, Muuqaal badan si loo arko waxa shaashadda taleefanka ku tarmo shaashadda iyo Tizen oo ah nidaamka hawlgalka. Qiimaha Samsung UHD 2020 55TU8005 waa 469 euro, dhammaantoodna waa keyd dhan 33%.
Waxaad ku iibsan kartaa Samsung UHD 2020 55TU8005 kaliya € 469 laga soo xigtay
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Maalinta Koowaad: gorgortanka mobilada iyo smartwatch ee aad wali ka faa'iideysan karto
Top 10 Barnaamijyada Anime Wallpaper